स्वास्थ्य राज्यमन्त्री यादवद्वारा अस्पतालकाे निरिक्षण - Everest Dainik - News from Nepal
स्वास्थ्य राज्यमन्त्री यादवद्वारा अस्पतालकाे निरिक्षण
– राजेन्द्र आचार्य
चितवन, असोज १३ । स्वास्थ्य राज्य मन्त्री नेपाल सरकारका स्वास्थ्य राज्य मन्त्री डा.सुरेन्द्र यादवले चितवन मेडिकल कलेजको अनुगमन गरेका छन् ।
मेडिकल सिटीको रुपमा विकसीत चितवनको रहेको यस मेडिकल कलेजले कस्तो उपचार सेवा दिएको छ भन्ने बारेमा आज स्थलगत अनुगमन गरेका हुन् ।
दिउसो ४ बजे चितवन मेडिकल कलेजमा आएको मन्त्री डा. यादवसहितको टोलीलाई अस्पतालका अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निर्देशक प्रो.डा.हरिशचन्द्र न्यौपानेले स्वागत गरेका थिए ।
मन्त्री सो अवसरमा अस्पतालका आकस्मीक कक्षहुदै विभिन्न विभागको निरीक्षण सम्बन्धीत चिकित्सकहरुबाट जानकारी समेत लिएका थिए ।
सोे अवसरमा प्रा.डा.शित्तल अधिकारीले मेडिकल आईसीयु, अस्पतालमा पहिलो पटक उपत्यका बाहिर सुरु गर्न लागेको कलेजो प्रत्योरोपण सेवाको विषयमा डा.छेतेन योङ्गजोङ्ग तथा चितवन बाहिर सञ्चालनमा रहेको १७ शैयाको पिआईसीयु सेवाको बारे डा.सन्तोष पाठक, अस्पतालको गुणस्तरी सेवाको विषयमा अस्पतालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रताप देवकोटा, अस्पताल निर्देशक डा. दयाराम लम्साल र अप्रेशन म्यानेजर पारस अधिकारी अस्पताल र अस्पतालको शिक्षण विभागको विषयमा म्यानेजर अरुण कोईरालाले जानकारी गराएका थिए ।
सो अवसरमा अस्पतालका निर्देशक डा. न्यौपानेले नीजि क्षेत्रबाट आफुहरुले ठुलो लगानी गरेर स्वास्थ्य उपचार सेवा दिए पनि सरकारको स्पष्ट नीति नीजि अस्पताल नीति प्रभावकारी नहुदाँ धेरै समस्या आएको जानकारी गराए ।
उनले आफुहरु मेडिकल सिटी चितवनमा गुणस्तरी सेवा दिन प्रतिवद्ध रहेको बताउदै निजि अस्पतालका समस्याहरु समाधान गर्न माग पनि गरेका थिए ।
याे पनि पढ्नुस चितवन बन्यो पूर्ण खोप जिल्ला !
अस्पतालमा विरामीहरुको चाप उच्च रहेको बताउदै सेवा विस्तार सरकारले विभिन्न विभाग, शैया तथा उपकरण थप्न गर्न सरकारको सहयोग खाँचो रहने डा. न्यौपानेका भनाई छ ।
उनले स्वास्थ्य विमाको प्रथम सेवा केन्द्र हटाएर रिफरल सेन्टर बनाएको जन गुनासो समेत मन्त्री डा.यादवलाई प्रकट गरेका थिए । सो अवसरमा बोल्दै मन्त्री डा.यादवले सरकारलाई स्वास्थ्य उपचार सेवा दिन नीजि अस्पालहरुको ठुलो भूमिका रहेको भन्दै सहकार्य गरेर अगाडी बढ्न आफुहरु तयार रहेको बताए ।
यस्तै मन्त्री यादवले सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको विकृतीअ अन्त्य गर्न फाईल ट्«याकिङ्ग सिस्टम लागु गरेको जानकारी दिदै अब स्वास्थ्य संस्थाको विकृत अन्त्य हुने बताएका छन् ।
“कहाँ के अवस्था, स्वास्थ्य संस्थामा कति जनशक्ति डाक्टर छन् त्यो फाईल ट्याकिङ्ग सिस्टमबाट हृर्नै काम भईरहेको छ उनले भने अब अस्पतालको मेसुले कहाँ के गर्छ सबै थाहाहुन्छ, विकृती अन्त्य हुनेछ । ” उनले जनता गुणस्तरीय सेवा १२ सय ठाँउमा नयाँ स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना गर्ने बताउदै अगामी बर्ष हरेक वडामा नै आधारभूत उपचार पुग्ने दावी पनि गरे ।